मानिसलाई सक्रिय बनाउन फिजियोथेरापी
शिरमेमोरियल अस्पताल, काभ्रे
– आज ६५ औं विश्व थेरापी दिवस कसरी मनाइँदैछ ? यसको महत्व के छ ?
विश्व फिजियोथेरापी दिवस विश्वभर आज अथार्त सेप्टेम्बर ८ तारेखका दिन भव्यताका साथ मनाइने गरिएको छ । विशेषगरी फिजियोथेरापी दिवसको अवसरमा फिजियोथेरापी पेशा के हो ? फिजियोथेरापिस्टहरु के हुन् ? मानिसहरुको स्वास्थ्यमा यसको के भूमिका रहन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न प्रकारका क्याम्पियनहरु, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सहित भव्यताका साथ विश्वभरी मनाइदैछ । यसै क्रममा हामीले पनि शिरमेमोरियल अस्पतालसँग मिलेर आज दौड प्रतियोगिता गर्दैछौं ।
– दौड प्रतियोगिताको उद्देश्य के हो ? अरु कार्यक्रमहरु के के छन् ?
हामीले स्कूलका बालबालिकाहरुलाई समेटेर फिजियोथेरापी सम्बन्धी निबन्ध प्रतियोगिता पनि राख्यौं । यसमा उत्कृष्ट हुनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौं । यसको उद्देश्य भनेको जनमानसमा फिजियोथेरापी सम्बन्धी चेतना बढाोस् भन्नु नै हो ।
– फिजियोथेरापी भनेको के हो ?
यो एउटा औषधी विज्ञानको महत्वपूर्ण भाग हो । यसमा भौतिक चिकित्सा पद्दतिद्धारा उपचार गरिन्छ । यसमा औषधिको प्रयोग भन्दा पनि तातो चिसोको प्रयोग, शरीरका जोर्नीहरु, मांशपेशीका तन्तुहरुलाई चलाएर उपचार गर्ने गरिन्छ । यस पद्दतिमा पहिले विरामीहरुको जाँच गरिन्छ । जाँचमा समस्या पत्ता लागिसकेपछि समस्या समाधानका लागि भौतिक माध्यमबाट गर्ने पद्दति नै फिजियोथेरापी पद्दति हो ।
– यो उपचार पद्दति कस्ता खाले विरामीलाई आवश्यक छ ?
फिजियोथेरापी उपचार मानिस गर्भ अवस्थादेखि नमरुन्जेलसम्म सबैलाई आवश्यक छ । प्रत्येक उमेर समूहका व्यक्ति र प्रत्येक रोगीहरुलाई यसको महत्व उत्तिकै छ ।
– मानिसले कुन उमेर समयमा यसको आवश्यकता महसुस गर्छन् ?
जब रोगले मानिसलाई समात्छ, मानिसहरुले विस्तारै गरिराखेको काम गर्न असमर्थ हुँदै जान्छन । रोग एउटा हुन्छ । त्यसको परिणामले शरीरको अन्य अंगमा पनि नकरात्मक असर पारिराखेको हुन्छ । यसले गर्दा व्यक्तिको जीवनको गुणस्तरता घटाउँदै लगेको हुन्छ । यसैकारण फिजियोथेरापीको मुख्य भूमिका भनेको मानिसलाई सक्रिय बनाउनु, क्रियाशील बनाउनु, रोगको अवस्थाबाट रोगीलाई पुर्नस्थापना प्रदान गरी पुनः पुरानै जीवनशैलीमा ल्याउनु हो । एउटा रोगको लागि एउटा चिकित्सकको मुख्य लक्ष्य भनेको त्यो व्यक्ति पुनः पुरानै अवस्थामा आओस् भन्ने उद्देश्य हुन्छ । यसको लागि फिजियोथेरापीको आवश्यक रहन्छ ।
– गर्भदेखि अन्तसम्मको समयमा कसरी फिजियोथेरापीको प्रयोग हुन सक्छ ?
फिजियोथेरापिस्टहरु चालसम्बन्धी र शारिरीक क्रियाकलापसम्बन्धी विज्ञ हुन्छन् । चाल भनेकै जीवनको संकेत हो । जब एउटा शिशु आमाको पेटमा आउँछ, त्यो बेलादेखि नै चाल शुरु हुन्छ । जीवन चालसँग सम्बन्धित छ भने चाल फिजियोथेरापी सँग सम्बन्धित छ । अर्थात जब शिशु पेटमा आउँछ स्वस्थ शिशु जन्माउन गर्भवती अवस्थामा महिलाको लागि पनि यसको महत्व धेरै छ । साथै बच्चा जन्मि सकेपछिको आइपर्ने समस्या समाधानको लागि पनि धेरै महत्व छ । मान्छे जब वृद्ध हुन्छ मृत्यु नहुन्जेलसम्म कुनै न कुनै चाल हुन्छ त्यसबेला पनि फिजियोथेरापीको महत्व र आवश्यकता पर्छ । यो सेवा शिरमेमोरियल अस्पतालमा गर्भवती महिला, सुत्केरी महिलाहरुको लागि पनि प्रदान गरिएको छ ।
– यो सेवा सबै गर्भवती महिलाहरुको लागि आवश्यक छ ?
यो वास्तवमा सबै गर्भवती महिलाहरुका लागि एकदमै लाभदायक छ । हामीले शिरमेमोरियल अस्पतालमा आउनुहुने सबै गर्भवती महिला, सुत्केरी, सुत्केरी पश्चातको महिलाहरुलाई लागि समेट्न खोजिरहेका छौं । मानिस पेटमा आउने बेलादेखि नमरुन्जेलसम्म यो सेवा आवश्यक छ । बढ्दो आधुनिकीकरण र सुविधाले गर्दा पनि मानिसलाई निस्क्रियता, अपांगतातर्फ धकेलिरहेको हुन्छ । यस समस्याको समाधानको लागि पनि अर्थात पुनः सक्रियता, क्रियाशीलताको लागि पनि फिजियोथेरापी आवश्यक छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि ७० वर्ष भन्दा माथिका १ तिहाई भन्दा बढी जनसंख्यामा आफ्नो दैनिक कृयाकलापहरु गर्ने क्षमता घट्दै गएको देखाएको छ । फिजियोथेरापिस्टहरुले व्यायाम र शारीरिक कृयाकलापद्धारा ति व्यक्तिहरुलाई फेरी क्रियाशील बनाउने, आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्ति बनाउँछन् ।
यसैगरी वृद्धावस्था हुँदै जाँदा ७० वर्ष भन्दा माथिका उमेरका व्यक्तिहरु लड्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ । जसले गर्दा गम्भीर चोटहरु लाग्ने पनि हुनसक्छ । ति व्यक्तिहरुमा पनि फिजियोथेरापी मार्फत व्यायाम र कसरत गरे त्यो समस्याबाट मुक्त पाउन सकिन्छ । त्यतिमात्र नभएर वृद्ध उमेरमा धेरैजसो व्यक्तिहरुलाई मानसिक पक्षघातले गर्दा अपाङ्ग भैरहेका छन् । यो समस्याको समाधानको लागि पनि शारीरिक कसरत, व्यायाम फिजियोथेरापी गर्न सकेमा झण्डै ११–१५ प्रतिशत यो दरलाई घटाउन सकिन्छ । त्यस्तै शारीरिक कृयाकलाप नगरेकै कारण २० प्रतिशत व्यक्तिहरुमा भुल्ने रोगहरु देखिएको छ । यदि नियमित व्यायाम र फिजियोथेरापी गरेको खण्डमा विर्सिने रोगबाट मुक्त पाउन सकिन्छ ।
– फिजियोथेरापी नगराउदा कस्ता समस्या देखा पर्छन् ?
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरी धेरैजसो महिलाहरुमा जसले बच्चा जन्माइसकेका छन्, उनीहरुलाई आङ खस्ने समस्या देखापरेको छ । १०० जना महिलाहरुमध्ये ३३ जना महिलाहरुमा यो रोग देखापर्ने गरेको छ । यो आङ खस्ने समस्याबाट जोगाउन पनि फिजियोथेरापी एकदम महत्वपूर्ण छ । यो आङ खस्ने समस्या गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला तथा सुत्केरी पछिका महिलाहरुसँग सम्बन्धित छ । कतिपय महिलाहरु बच्चा पाइसकेपछि काम गर्न जान्छन् जसले गर्दा यो समस्या निम्तिने गर्दछ । फिजियोथेरापिस्टको सानो सल्लाह र सिकाईएको व्यायामले पनि महिलाहरुको जीवनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
– फिजियोथेरापीले अरु रोगहरु पनि निदान गर्छ ?
फिजियोथेरापिस्टले विभिन्न खाले दुखाईहरु कम गर्न मद्दत गर्दछ । फिजियोथेरापिस्टले विना औषधी दुखाई कम गर्न सहायता गर्न सक्छन् । हाड भाँचिएको केशमा लामो समयसम्म प्लास्टर राखिदिन्छ, वा अप्रेसन गर्दाखेरी लामोसमयसम्म रडहरु राख्दा, मासुहरु खुम्चिने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा फिजियोथेरापिस्टहरुले खुम्चिएको मासुहरु तन्काउने, खुम्चेका जोर्नीहरु चलाउन मद्दत गर्ने, हिँड्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई विभिन्न साधनहरु प्रयोग गरी हिँड्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । त्यस्तै जोर्नीसम्बन्धी बाथ रोग, मुटु, फोक्सो, उच्च रक्तचाप, हृदयघाट, घटाउन पनि फिजियोथेरापिस्टबाट निर्देशित व्यायामहरु नियमितहरु गर्ने गरेमा केही हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ । त्यस्तैगरी फोक्सोसम्बन्धी रोगहरु दम, निमोनिया, क्यान्सरजस्ता रोगको न्यूनीकरणका लागि पनि यसको अति नै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यस्तै गरी मानसिक रोग, प्यारालाईसिस, विर्सने रोगलाई पनि फिजियोथेरापीले निकै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ । त्यसैगरी डाईबिटिजका रोगीहरुलाई सुगरको मात्रा घटाउनको लागि पनि फिजियोथेरापीले सहयोग पु¥याउँछ । त्यस्तै नशासम्बन्धी रोगका विरामीहरुलाई पनि यसले फाईदा पु¥याउँछ ।
– कस्ताखाले विरामीहरुलाई मात्र फिजियोथेरापीको आवश्यकता छ ?
फिजियोथेरापिस्ट एक्लैले सबै काम गर्न सक्दैन । त्यसैले हामी समूहमा नै गर्ने गर्छाैं । हामीकहाँ दुई तरिकाबाट विरामीहरु आउने गर्दछन् । एउटा डक्टरको रिफरमा र अर्काे डाइरेक्ट समस्या लिएर आउँछन् । यदि उहाँहरुलाई थप कुराको चेकअपको आवश्यकता छ भने हामी भनिदिन्छौं । तर फिजियोथेरापीले मात्र उपचार गर्दा निको हुने रहेछ भने हामी अनावश्यक खर्चको लागि चारतिर दौडाउँदैनौं । तर आवश्यकता अनुसार थप सेवा चाहे मात्र थप सेवाको लागि सुझाव दिने गर्छौं ।
– कुन माध्यमबाट फिजियोथेरापीको सेवा लिन सकिन्छ ?
हाम्रो देशको इतिहास हेर्ने हो भने ३५–४० वर्षदेखि फिजियोथेरापीको सेवा प्रदान हुँदै आइरहेको छ । तर अन्य विकसित देशमा हेर्ने हो भने पहिले विरामीहरु फिजियोथेरापिस्टकहाँ जान्छन् । त्यसपछि फिजियोथेरापिस्टको सल्लाहबमोजिम मात्र अरु स्वास्थ्यकर्मीकहाँ भेट्न जान्छन् । तर हाम्रो देशमा यसको उल्टो छ । वास्तवमा फिजियोथेरापिस्टहरुलाई जुन शिक्षा दिईन्छ त्यो शिक्षा जुन विरामी रोगको लागि जँचाउन आउँछन् त्यस विरामीलाई तालिम प्राप्त फिजियोथेरापिस्टले कसरी जाँच्ने, कसरी उपचार गर्ने भन्ने सम्बन्धी दक्षता हासिल गरेका हुन्छन् । म के पनि भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईहरुलाई समस्या छ भने सिधै फिजियोथेरापिस्टलाई पनि भेट्न सक्नुहुन्छ । र उहाँहरुले आवश्यक पर्ने सल्लाह र सुझाव दिनुहुन्छ ।
– गाउँघरमा तेल लगाएर गरिने मालिस फिजियोथेरापी हो ?
धैरै मानिसहरुको बुझाई मालिस गर्नु नै फिजियोथेरापी भन्ने छ तर त्यो होइन । यो एउटा विधि मात्र हो । यो दुखाई कम गर्नको लागि मात्र प्रयोग गर्छाैं । फिजियोथेरापी मालिस मात्र होइन । यो योगा पनि हो कि भनेर पनि झुक्किने गर्दछ । तर फिजियोथेरापी योगा पनि होइन । फिजियोथेरापीमा पहिलो कुरा रोगको पहिचान गर्छाैं । रोगको पहिचान पश्चात सम्बन्धित उपचार मात्र गर्ने गरिन्छ । व्यक्तिगत रुपमा योजना बनाएर उपचार गर्ने गरिन्छ । यसमा मालिस, व्यायाम, कसरतजस्तो क्रियाकलाप गर्ने गरिन्छ ।
फिजियोथेरापीले जीवनलाई गुणस्तर बनाउँछ, सक्रिय, आत्मनिर्भर बनाउँछ, दीर्घायू दिन्छ । उपचार र स्याहारमा पनि कमी ल्याउँदछ । तसर्थ तपाईको दुखाई सम्बन्धी, चालसम्बन्धी, शारिरीक क्रियाकलाप सम्बन्धी कुनै समस्या छन् भने निर्धक्कसाथ नजिकैको अस्पतालमा गई अनुभवी दक्ष फिजियोथेरापिस्टसँग भेटेर परामर्श तथा उपचार गर्न सक्नुहुनेछ । त्यो भन्दा बाहेक थप उपचार चाहिएमा उहाँहरुले सल्लाहसुझाव दिनुहुनेछ ।
–प्रस्तुतीः मोतीराम तिमल्सिना
प्रकाशित मिति: 08 September, 2016